Faahfaahin dilka hogaamiye sare oo “ka tirsan Al-Qaacida” oo lagu dilay Soomaaliya – SBC
Faahfaahin dilka hogaamiye sare oo “ka tirsan Al-Qaacida” oo lagu dilay Soomaaliya
Posted by editor on January 23, 2012 Comments
Hogaamiye sare oo lagu tilmaamah in uu ka tirsanaa Al-Qaacida haystayna dhalashada Ingiriiska balse asalkiisu yahay Lubnaan ayaa la xaqiijiyey in lagu diley duleedka magaalada Muqdisho, dilkaasi oo la aaminsan yahay in Mareykanku ay fuliyeen.
Hogaamiyaha la diley ayaa lagu magacaabay Bilal el-Berjawi wuxuu ku koray magaalada London gaar ahaan Galbeedkeeda, waxaa la sheegay in wali qoyskiisu ay degan yihiin dalka Ingiriiska inkastoo ay ka gaabsanayaan inay saxaafada ka muuqdaan.
Qaar ka mid ah jaraa’idka ka soo baxa magaalada London ayaa sheegay in ninka la dilay qoyskiisu ay sheegeen in aanay wax xiriir ah mudo la laheyn, iyadoo taasi lagu macneeyey in uu diidanaa in la ogaado halka uu joogo iyo waliba in lagu bartilmaameysto xiriiradaasi dhanka Telefoonada.
Bilaal oo loo yaqiin Abu Hafsa wuxuu yimid magaalada London isagoo yar waxaana isaga iyo qoyskiisa ay ka dalbadeen wadanka Ingiriiska magangalyo siyaasadeed iyagoo ka helay deganaanshaha qaxootinimo ama Asylum, waxaana jira warar sheegaya in ka hor intii aanu aadin Soomaaliya uu tagey dalka Afgaanistaan halkaasi oo uu ka soo dagaalamay.
Sanadkii 2006-dii ayaa Bilal el-Berjawi (Abu Hafsa) wuxuu tagey magaalada Muqdisho xiligaasi waxaa ka socdey Muqdisho dagaal u dhaxeeyey xoogagii maxkamadaha Islaamiga & qabqabalayaashii ka talin jirey Muqdisho.
Sida la rumaysan yahay wuxuu ka mid ahaa tiro dagaalyahano shisheeye oo isagu jirey Mareykan, Carab, Afgaanistaaniyiin, Pakistaaniyiin, Afrikaan iyo reer Yurub oo u tagey Soomaaliya sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gulufka dagaal ee Al-Qaacida & Shabaabku ku tilmaamay dagaal jihaad ah oo Soomaaliya ka socdey sanooyinkii la soo dhaafay.
Warsaxaafadeed ka soo baxay xarakada Al- Shabaab oo lagu faafiyey barta Internet-ka ee ay ku leeyihiin adeega Twitter-ka waxay ku cadeeyeen geeriga Bilal el-Berjawi (Abu Hafsa), waxaana ay sheegeen in ninkaasi uu ka mid ahaa sida warsaxaafadeeedka lagu xusey muhaajiriinta Soomaaliya yimid Jihaadka, iyadoo lagu xaqiijiyey warsaxaafadeedka in uu ka qayb galey Bilaal dagaalo badan oo ka dhacay Soomaaliya.
Hawlaha Bilal el-Berjawi
Ilo wareed oo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in Bilal el-Berjawi uu ka mid ahaa saraakiisha sar sare ee xoogaga Amniyaadka ee Al-Shabaab isagoo si gaar ah u maamulayey unuga ajaaniibta Al-Shabaab ka barbar dagaalamaya.
Ilo wareed oo kale ayaa sheegaya in uu ahaa tababare sare oo xoogaga Shabaabka ka caawin jirey dhanka tababarada, habka loo maleego waxyaabaha qarxa iyo waliba farsamooyin kale.
Xiriirka Bilal el-Berjawi & Fasul Cabdalla
Bilal el-Berjawi waxaa la sheegay in ay aad isagu dhawaayeen hogaamiyihii Al-Qaacidada Bariga Afrika oo bishii June ee sanadkii hore lagu diley weerar ka dhacay bar control oo ku taal duleedka magaalada Muqdisho.
Xiriirka Bilaal & Fasul ayaa la sheeg in uu ahaa mid soo taxnaa mudo sanooyin ah, iyadoo la sheegay in duqeymo ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo oo lagu bartilmaameysanayey Bilaal in uu ka badbaadey sanadkii aynu ka soo gudubnay.
Laakiin wargeyska The Long war Journal oo dhacdadaasi ka hadlayey wuxuu sheegay in lagu diley weerarkaasi Ibraahim Afqaani oo ka mid ahaa saraakiisha sar sar ee Shabaabka lagu dhaawacay Bilaal, balse Shabaabka lagama hayo wax beenin ama xaqiijin warkaasi.
Wararku waxay sheegayaan in Bilaal loo qaaday dalka Kenya isla markaana halkaasi looga daaweeyey dhaawac dhanka madaxa ka soo gaarey, inkastoo ilo madax banaan oo xaqiijinaya warkan aanay jirin si buuxda.
Sirdoonka reer Galbeedka ayaa ku tilmaamay Bilal el-Berjawi in uu qayb ka ahaa maskaxdii dajisay weerarkii bam ee ka dhacay magaalada Kampala goob loogu daawaneyey ciyaaro ka tirsanaa koobkii aduunka ee lagu qabtey Koonfur Afrika.
Dilka Bilaal wuxuu dhacay sabtdii 21-ka bishan, waxaana uu ka dhacay banaanka hore deegaan ku dhaw Isbitaalka Xayaad ee deegaanka Ceelasha biyaha, warar ayaa sheegaya in halkaasi ay ku leeyihiin Shabaabku xarun.
Dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey in sadex qarax oo xoogan ay maqleen isla markaana uuro iyo qiiq weyn ay xirtey halkii dayaanka madaafiicda laga maqley.
Xoogaga Shabaabka ayaa isku gadaamay halka uu ka dhacay qaraxu, waxaana ay diideen in dadku ku soo dhawaadaan, iyadoo goor dambe Shabaabku xaqiijiyeen geeridiisa.
Dilku wuxuu dhacay dharaar cad xiliga saacada geeska Afrika aheyd 2-da duhurnimo, waxaana quburada dhanka military-gu ay sheegayaan in uu ahaa mid qorsheysan oo ay ku lug lahaayeen sirdoon dhulka ku sugnaa oo hagayey diyaarada.
Da’diisa & shaqadii hore ee lagu yaqiin
Bilaal waxaa la sheegay in intii uu ku noolaa dalka Ingiriiska shaqadiisu ay aheyd farsamada qaboojiyeyaasha, waxaana qaar ka mid ah jaraa’idka ka soo baxa London ay sheegeen in uu dalka Kenya uu uga gudbay Soomaaliya.
Sirdoonka Kenya war laga helay waxay sheegeen in Bilaal uu mudo ku sugnaa dalka Kenya isla markaana uu ahaa madaxa xafiiska mukhaabaraadka(Sirdoonka) ee Al-Qaacida ee magaalada Nairobi, balse markii dambe uu u baxsadey Soomaaliya.
Kenya waxay ku tilmaamay Bilaal in uu ahaa ninka labaad ee ku xiga Fasul Cabdalla, waxaana taasi xoojinaya warar tibaaxaya in Bilaal si aan la shaacin uu u maamulayey hawlihii Fasul Cabdalla ee madaxa Al-qaacidada bariga Afrika.
Xaaskiisii oo maalmo ka hor dhashay
Wargeyska The Guardian warbixin uu qoray wuxuu saaka ku daabacay in xaaska Bilaal ay ilmo ku dhashay Isbitaal ku yaal magaalada London maalmo ka hor intii aan la dilin, waxaase la yaab leh Bilaal oo la sheegay in uu London ka tagey 6 sano ka hor sida xaaskiisu todobaadkan ilmo u dhashay taasina waa calamad su’aal taagan.
Laakiin wargeyska The Guardian wuxuu daabacay in Bilaal oo dhaawacmay bishii June ee sanadkii hore in xaaskiisu ay dib ugu soo laabatey magaalada London dhawaan.
Britain oo ka hadashay dhalashadiisa.
Xafiiska arimaha dibada ee dawlada Britain waxay meesha ka saareen in Bilaan uu ahaa muwaadin British ah, waxaana hadalkan loo fasirtey in 12 bilood ka hor lagala laabtey Bilaal dhalashada British-ka.
Bilal el-Berjawi da’diisu waxay aheyd 27 sano, waxaa la sheegay in intii uu ku sugnaa Soomaaliya uu aad uga carari jirey in sawirkiisa la qaado ama laga duubo muuqaal, isla markaana uu ahaa nin aad feejigan had iyo goor.
Sarkaal kale oo ajanabi ah oo weerarka ka badbaaday.
Ilo wareed oo aan si buuxda loo cadeyn ayaa xusaya in weerarkii lagu diley Bilaal uu ka badbaaday hogaamiye sare oo ka mid ah ajaaniibta ku sugan Soomaaliya kaasi oo magaciisa lagu soo koobay oo kaliya Ikrima.
DKMG & Al-Shabaab oo saraakiil muhiim ah todobaadkan waysay
Dilka Bilaal wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dagaaladii cuslaa ee todobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan dawlada KMG Soomaaliya kaasi oo lagu magacaabi jirey Siciid Cabdi Jaras.
Wargeyska The Guardian oo raad jooga warkan wuxuu qoray in dilka Siciid & Barwaaji ay ka dhigan tahay in colaada Soomaaliya lagu diley laba qof oo muwaadiniin British ah.
Laakiin wargeyska oo ka hadlayey muwaadinimada lagala noqdey Bilaal wuxuu daabacay in Bilaal qudhiisu uu qorsheynayey in uu qabsado qareen arintan ku aadan, laakiin qareenada difaacaya qoyskiisa waxay sheegeen in ay ku adag tahay inay xiriir telefoon la sameeyeen ninkaasi taasi oo halis dhanka amaanka ah leh.
Inkastoo wargeysku qorey sheekadan qoray hadana wuxuu raaciyey in qoyskiisu ay dafireen in wiilkoodu uu ahaa sarkaal ka tirsanaa Al-qaacida.